Atambaro ny lohateny sy ny endriny vita tanana amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Atambaro ny lohateny sy ny firafitra miaraka amin'ny Photoshop
Raha te hahafantatra ianao hoe mamorona lohateny misy volony na koa sary hanomezana sentety mamorona ny lohateny, mamaky hatrany, holazainay aminao ny fomba hahatratrarana azy mora foana amin'ny fampiasana Photoshop.
Ireo litera dia azo atambatra amin'ny haitao nataontsika, alaina avy amin'ny Internet na saripika isan-karazany. Ao amin'ity lesona ity hianarantsika ny hanome azy io mikasika manokana amin'ny lahatsoratray.
1 Volavola vita tanana
2 Alamino ny sosona
3 Inona avy ireo endritsoratra mety indrindra?
Volavola vita tanana
Tena mahaliana mamorona ny endrikay manokana amin'ny tanana, azontsika atao ny mampiasa crayons, pensilihazo miloko, loko, pastel na fitaovana fanaovana sary. Ny fanamaivanana sisa tavela dia azo jerena ary amin'ity fomba ity no hahazoantsika apetaho amin'ny endrika an-tsary amin'ny loharanon-tsainay.
Ny dingana voalohany dia mamorona na mifantina firafitra. Rehefa nojerentsika ilay izy dia hanohy hanokatra azy amin'ny Adobe Photoshop isika. Tadidio fa tsy ny sary rehetra akory no hanao, kalitao dia tokony ho kely indrindra mba tsy hananana pixel.
Mamorona a sosona vaovao ho an'ny lahatsoratra, afaka manoratra izay tiantsika isika. Ataovy ao an-tsaina fa raha matevina kokoa ny litera, dia vao mainka azo ampiharina ny firafitra. Rehefa manana ny lahatsoratra isika dia hametraka azy amin'ny toerana irina.
Alamino ny sosona
Alohan'ny hampiharana ny vokany dia tsy maintsy ataontsika mandrindra sosona. Noho izany, ny sary na ny firafitra sosona dia tokony ho ambonin'ny sosona lahatsoratra. Zava-dehibe izany manarona ny lahatsoratra rehetra.
Avy eo, miaraka amin'ny sosona sary voafantina, handeha eo amin'ny menio ambony isika ary hanaraka ity zotra ity: Layer - Mamorona Sarontava Clipping. Ho azontsika avy hatrany ny vokany. Azontsika atao ny mamindra ny sary amin'ny alàlan'ny lahatsoratra mandra-pisehoan'ny habaka tadiavintsika.
Inona avy ireo endritsoratra mety indrindra?
Miankina amin'ny vokatra tadiavintsika ny zava-drehetra, fa araka ny efa nanehoanay hevitra teo aloha, ny matevina sy ny habe kokoa. Ny tetika iray dia ny fisafidianana ny lanjan'ny "sahy" na "extrabold." Mety misy ireto endritsoratra mahaliana sasany ireto:
Ny valiny dia tena manintona ary tsy isalasalana, mitondra toetra be dia be amin'ny volavolantsika. Izy ireo dia afaka mampiditra firafitra hafa amin'ny litera tsirairay. Misy safidy maro karazana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Atambaro ny lohateny sy ny firafitra miaraka amin'ny Photoshop
Tetibola ho an'ny tetikasa famolavolana
Amboary ny lahatsoratra amin'ny tranokala rehetra ho any Lorem ips miaraka amin'i Loremizer